बच्चालाई गर्भैदेखि अशं
मुलुकी ऐनको पहिलो संशोधनले जन्मेपछि हैन गर्भैदेखि अंश दिने प्रावधान
| 2018-08-07 Published
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । मुलुकी ऐनको पहिलो संशोधनले धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याएको छ । मुलुकी ऐनको देवानी (संहिता), २०७५ ले यस्तो नयाँ प्रावधान ल्याएको हो ।
भदौ १ देखि लागू हुने तयारीमा रहेको मुलुकी देवानी (संहिता), २०७५ अन्तर्गत कार्यविधि ऐनको अंशवण्डाले यस्तो नयाँ प्रावधान ल्याएको छ ।
अंशवण्डा गर्दाको बखत यदि महिला अंशियार गर्भवती छन् भने उनको गर्भमा रहेको शिशुले समेत अंश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
आजसम्मको अभ्यास र ऐनले सँगोलको सम्पति बच्चा जन्मिएपछि मात्र भागवण्डा पाउने रहेकोमा यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै यस्तो कानुन ल्याइएको हो ।
हालको व्यवस्था अनुसार सँगोलको सम्पत्ति वण्डा हुँदा पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार हुने व्यवस्था थियो ।
तर अब आमा अंशियार भए गर्भको बच्चालाई पनि अंश छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।
गर्भमै अंश, छोरीलाई पनि वंश
यस अघिको मान्यतामाथि नेपालले क्रान्ति नै गरेको कानुनविद्हरुको राय छ । किनकि, महिलालाई सम्पत्तिको अधिकार दिन पनि कञ्जुस्याइँ गर्नेहरुले अब महिलालाई सम्पत्ति दिनु त पर्छ नै, गर्भको शिशु छोरी नै भएपनि अंश छुट्याउनु पर्ने छ ।
अंशमा समान अधिकार स्थापित गर्न खासगरी छोरीलाई कानुनीरुपमा नै अंश दिलाउन यो प्रावधानले योगदान पुर्या‍उने अधिवक्ता मीरा ढुंगानाको भनाइ छ ।
उनी भन्छिन्, ‘समान अंशका लागि कानुनीरुपमा निकै लडाइँ लड्नुपर्यो, अब गर्भकै शिशुले अंश पाउने भएका छन्, त्यो निकै राम्रो व्यवस्था हो ।’
यसले आमा र शिशुको अधिकार स्थापित हुनेमा आफू आशावादी रहेको उनको भनाइ छ ।
आमाको गर्भमा हुँदादेखि नै अंश पाउने कानुनी व्यवस्था भएपछि छोरा र छोरीमा हुने विभेदको अन्त्य हुने अधिकारवादीहरुको धारणा छ ।
अबको नयाँ व्यवस्था अन्तर्गत छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने तर छोरीलाई पन्छाउने परिपाटीको अन्त्य गर्ने छ । किनकि, आमा र शिशुका लागि सम्पत्तिको अधिकार ग्यारेन्टी भएको छ ।
बच्चा आमाको गर्भमा रहँदै दिइने अंशले गर्भमै गरिने भ्रुण हत्यालाई समेत कम गर्ने अधिवक्ता उषा मल्ल पाठकको धारणा छ ।
बच्चा मृत अवस्थाको जन्मेमा के हुने त ?
यसबारे जिज्ञासा गर्दा वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना भन्छिन्, ‘अंशवण्डा गर्ने अवधिमा अंशियार महिलाको गर्भबाट जन्मने बच्चाले पनि समानरुपमा अंश पाउने छ । तर, यदि बच्चा मृतावस्था जन्मिएमा वा गर्भ खेर गएमा त्यो सम्पत्ति सँगोलमै भाग लाग्ने हुन्छ ।’
१८ वर्षसम्म बालकै
यस ऐनले अर्काे नयाँ प्रावधान ल्याएको छ । हालसम्म उमेर पुगेर अंश माग्नु पर्दा १६ वर्ष पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर यो उमेर अब बढेर १८ वर्ष पुगेको छ ।
१८ वर्षसम्मलाई बालककै अवस्थामा राखेको छ । आमाको गर्भमै रहँदा अंश पाउने व्यवस्था हेर्दा ऐनले समानताको सिद्धान्तलाई अनुशरण गरेको देखिन्छ ।
यो ऐन आउने भदौ १ गतेदेखि प्रभावकारी हुने छ ।
मंगलबार, २२ साउन, ०७५
बच्चालाई गर्भैदेखि अशं...
‘छोरी बचाऊ’ अभियानः प्रति छोरी ३ हजार ...
अक्षरा स्कुलको शैक्षिक प्रदर्शनी...
भारत लैजाँदै गरिएका २० बालकको उद्धार...
अपाङ्गलाई ज्याकेट र स्वीटर वितरण...
प्रहरीद्वारा बालिकाको जिम्मा...
शुभकामना आदान प्रदान गर्दै ‘डिन’...
ग्लेसियर इन्टरनेसनलको ग्रान्ड फिनाल�...
भारतीय गुगल ब्वाय कौटिल्य नेपालमा...
हिमालयन एअरलाईन्सद्वारा छात्रवृति प�...
१४वर्षे बालकसँग ‘ड्रोन’ ५करोड सम्झौत...
सडक बालबालिकामुक्त सडक......
धुर्मुस सुन्तलीको— ज्योति बल्यो यसरी...
धुर्मुस–सुन्तको बालमैत्री अभियान रस�...
अब डिजिटल डटर !...
बाढी पीडित र बालबालिका ?...
भोटो जात्राको रोचक कथा ?...
यी हुन् चिनियाँ बालबालिका ...
जोखिमममा बालबालिको भविष्य...
बाल प्रतिभा तिखार्न गोकर्णेश्वर आइडि...
गाउँका स्कुलमा पनि प्रतिभा हुन्छन् ह�...